Webka ugu Fiican Rikoodhka Hore (Ka hooseeya $ 5 / месец)
09.05.2020 Category: Няма категория
Hoyga internetka ee wanaagsan waa waajib saaran dhammaan bogagga iyo blogada; НО oo aan khasab ahayn inaad ku darto gacanta iyo lugta.
Ilaa hadda, waxaan tijaabinay dib u eegay in ka badan shirkadaha 60 martigeliyey. Jadwalka hoose wuxuu muujinayaa qaar ka mid ah qorshayaasha martigalinta qiime jaban ee ugu wanaagsan ee aan ka helnay khadka tooska ах. Shirkadahaani waxay bixiyaan habka ugu raqiisan ee lagu marti-galiyo degel – Haddii aad raadineysay xallin miisaaniyadeed – iyagu waa kuwa iska hubiya.
КомпанияQiimeeynta SaxeexaQiimaha CusbooneysiintaDomain-ka DiiwaangashanDomain Free? Socdaalka Soogalootiga Bilaash ahMoney Назад
Soo dhaweynta $ 0,80 / мес $ 7,99 / мес 1 маи Наа 30 млечни храни
InMotion хостинг $ 3,99 / мес $ 7,99 / мес 2 маи Наа 90 маламуд
InterServer $ 5,00 / мес $ 5,00 / мес неограничен маи Наа 30 млечни храни
A2 хостинг $ 3,92 / мес $ 7,99 / мес 1 маи Наа Вакти каста
HostPapa $ 1,67 / мес $ 9,99 / мес 2 Наа Наа 30 млечни храни
GreenGeeks $ 2,95 / мес $ 9.95 / мес 1 Наа Наа 30 млечни храни
TMD хостинг $ 2,95 / мес $ 4,95 / мес 1 Наа Наа 60 маламуд
WebHostFace $ 0,69 / мес $ 6,90 / мес 1 маи маи 30 млечни храни
FastWebHost $ 2,97 / мес $ 5,95 / мес 1 Наа маи 30 млечни храни
Ipage $ 1,99 / мес $ 7,99 / мес неограничен Наа маи 30 млечни храни
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo: $ 0,80 / месец – Riix halkan si aad u dalbato hadda
Hostinger wuxuu bixiyaa adeegyo badan oo martigeliya, oo ka mid ah kuwa ugu sareeya ee leh qorshaha martigelinta hawada ee VPS si ay u bilaabaan kuwa doonaya in ay ku bilaabaan martiqaad la wadaago.
Qorshaha ugu raqiisan ee macaamiisha – “Single” waxaa lagu qiimeeyaa $ 0,80 / мес. Qiimaha восък ka yar hal doollar, waxaad uheleysaa inaad martigeliso websaydhka 1 oo leh xadka diskiga 10 GB iyo 100 GB честотна лента, oo lagu daro astaamo cusub sida shaqooyinka cron hore, Curl SSL, MariaDB iyo keydka baddya anodo Bba Хелин. ka hel qorshaha martigelinta miisaaniyad.
Haddii aad diyaar u tahay inaad waxyar ka badan bixiso, Qorshaha Marti-gelinta ee Bilaashka ah ee Bilaashka ах (wuxuu ka bilaabmayaa $ 2.15 / мес.) tiro kale oo weerarro internetka ах; iyo Mail Assassin, oo kaa difaacaya farriimaha spam.
0.1 2 хостинг в InMotion
0.1.1 Dib udarsashada Degdegga ах: Waxa aan ka fikirayo Interserver
0.2 4 – A2 хостинг
0.2.1 Marti-gelinta “домакин Папа”
0.3 6- GreenGeeks
0.3.1 TMD Marti Faa’iidada & Khasaaraha
0.6.1 Haddii aad ku socoto websaydh heerar ganacsi oo raadinaya qalab aad u awood badan, ka fiiri Nagios Uptime iyo Cacti. Dhibaatada # 3: deriska xun Mararka qaar, martida qiimaha jaban waxay ku dhacaan waxa loo yaqaan ‘deriska xun’. Derisyadaan xun ayaa ах kuwa isbaaraya kuwaas oo cunaya sahayda adeegga ama kuwa websaydka aan sharciga lahayn ee la jabsaday. Haddii aad la wadaagto server-ka leh spamka, ma jiri doonto ilo kugu filan. Haddii aad la wadaagto adeegsade qof leh tiknoolajiye ama fayraska kombiyuutarka, goobtaada ayaa laga yaabaa inay qaadsiiso sidoo kale. Xalka: Hubi martida IP-ga kahor intaan la gelin
0.7.1 Xalka: Akhri ToS; Ka fogow shirkadaha martigelinta raqiis ах oo leh siyaasad isticmaali karo su’aal
0.9.1 Xalka: Ku dhaji marti-geliyaha u oggolaanaya 150 000 inod iyo kor
2 В Nutshell ах: Dhammaan Webka Guurtidu waa mid xun
2.2 Wixii bilow ах –
Ku sey hal домейн kaliya hal koonto
Lama helin galitaanka SSH / sFTP ee Keli ах
2 хостинг в InMotion
Аримаха Гудаха е хостинг на InMotion
Hawlaha adag ee serverka, wakhtiga kor ku xusan> 99.95% TTFB ~ XNUMHMS
Домерът на Magaca ee bilaash ах
Gacan-siinta fiican iyo taageerada emailka
Macaamiisha bilaashka ах ee bilaashka ах macaamiisha
Qorshayaasha heerarka gelitaanka (La bilaabay) waxaa lagu soo buuxiyay dhamaan siyaabaha lagama maarmaanka u ah martigelinta website-ka ganacsiga
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo: $ 5,00 / месец – Riix halkan si aad u dalbato
Isaga oo loo aqoonsado bixiye raqiis ах oo raqiis ах, InterServer wuxuu ku takhasusay wadaagista, VPS, oo loo qoondeeyey, iyo xalinta wada-xaajoodka.
Shirkadu ma kordhin qiimaha ka dib markii muddada koowaad – InterServer wadaagista qorshaha martigelinta waxaa lagu xiraa $ 5 / месец, iyo
Waxay u oggolaanayaan dadka isticmaala inay ku martigeliyaan domains aan xadidnayn oo ka hooseeya $ 5 / mo (qorshayaasha miisaaniyadeed ee aynu ka wada hadalnay qodobkan waxay u oggolaanayaan hal domain midkiiba)
Labadan arrimood waxay sameeyeen InterServer dooro sahlan marka aad qorsheyneyso in aad ku martigeliso shabakado badan oo ah (baabuurta yar yar) ee xisaabta hal jeer oo ka badan sanadada 5.
Dib udarsashada Degdegga ах: Waxa aan ka fikirayo Interserver
Waxaan bilaabay isticmaalka InterServer tan iyo 2013 oo booqday shirkadda HQ ee Seekaucus, New Jersey ee 2016. Hawlgalkooda adeegyadu waxay ahaayeen taageerooyin adag oo adag oo taageero farsamo ah (dhammaantood waxaay vaxaay sameeye) Waxaad akhrin kartaa aniga faahfaahin dheeraad ah ee InterServer dib u eegis.
Goobta xafiis ee Maraykanka oo kaliya – shirkadda waxay dhisaan oo maamulaan xaruntooda xogta iyaga oo jooga Ню Джърси.
4 – A2 хостинг
Waxqabadka ugu wanaagsan ee сървър; TTFB <550ms
Khatarta khatarta ах – marwalba lacagta dammaanadda ах
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo: $ 3.95 / месец – Riix halkan si aad u dalbato
2006 waxaa sameeyey Джейми Опалчук, HostPapa waxay ku taallaa Онтарио, Канада.
Waxaan sameeyay a wareysi uu soo qaaday HostPapa, Jamie Opalchuk, декември 2016 г. Waxaan ka wada hadalnay howlaha shirkadaha iyo ganacsiga; Г-н Jamie wuxuu ahaa средата на aad u hufan oo восък ку оол ах jawaabihiisa.
Waxaan raadineynay martigeliyaha webka tan iyo bartamihii 2017. Waxaad восък badan ka baran kartaa khibrada aan ku leeyahay eeg faahfaahintan HostPapa.
Shakhsi ahaan waxaan helay HostPapa OO ах Hoy wanaagsan – ma ahan kuwa ugu fiican, laakiin qiimaha jaban ее raqiis ах Waa hubaal weyn OO dheeraad ах – iyada OO tixgelinaysa в qorshaha ugu jaban UU sidoo зеле ла yimaado magaca domainka bilaashka ах, kaydinta 100 GB, iyo 120 bilaash ах ах lagu dhisay boggan.
Marti-gelinta “домакин Папа”
Kharashka cusboonaysiinta qadarinta – Kharashka Qorshaha Bilawga ah $ 7.99 / bil kadib muddada koowaad
Xawaaraha sare ee server – ayaa lagu qiimeeyay A iyo wixii ka sareeya dhammaan imtixaanka xawaaraha
In ka badan sanadihii 15 ee diiwaanka ganacsiga la xaqiijiyay
Macaamiisha cusub ee socdaalka bilaashka ах
Добре си струва парите – $ 2,95 / мое си аад u marto goobo aan xadidnayn oo koonto ah (oo leh nuqul maalinle ах)
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo: $ 2,95 / месец – Riix halkan si aad u dalbato
Marka ugu horeysa macaamiisha, qorshaha wadaagga ee TMD wuxuu ka bilaabmaa $ 2,95 / месец – 60% qiimaha qiimaha cusbooneysiinta. Shirkadu waxay ku dhowdahay in ka badan sanado 10 waxaana ku yaal отдалеч xarumo xogeed oo ku baahsan Maraykanka iyo xarun xogeed oo dibedda ah ee Amsterdam.
Faahfaahin dheeri ах о ку ку saabsan TMD хостинг е ку ку saabsan dib-u-eegis qoto dheer.
TMD Marti Faa’iidada & Khasaaraha
Waa tan waxa aan jeclahay oo necbahay TMD хостинг.
Стандартна облачна калария
Xoogaa aad u jaban – kaliya $ 0,69 / мес.
Waxqabadka сървър ee la aqbali karo, celceliska martigelinta wakhtiga kor ku xusan 99.9%
Qorshaha ugu qaalisan ee la saxiixo: $ 2,97 / месец – Riix halkan si aad u dalbato
FastWebHost (FWH) qorshaha martigelinta ugu jaban (oo loo yaqaan "стойност") wuxuu ku bilaabmaa sida hooseeya $ 2,95 / мес.
Waxaan jecel nahay qorshaha miisaaniyadda FastWebHost ee qiimaheeda iyo astaamaha amniga. Waxaad heli doontaa xarun martigelin aasaasiga ах oo lagu daray Ilaalinta DDoS markaad saxiixdo Qorshaha Qiimeeynta.
Прочетете Dib u eegista на Jason’s FastWebHost iyo Abrar Bixiyeyaasha ugu wanaagsan ee Hindiya si aad wax dheeraad ah uga ogaato shirkadda. Waxaan sameynay baaritaanno fara badan oo ku saabsan FWH waxayna u maleynayaan inay yihiin mid ka mid ah adeegyada ugu wanaagsan ee lagu wadaago ee Индия.
Kuwa ka fikiraya FastWebHost, halkan waa aragti deg deg ah oo ku ku saabsan faa’iidooyinka iyo khasaaraha.
Ku marti hal домейн kaliya leh xisaab 20 GB kharashka koontada
75% qiimo dhimis lagu saxiixay – la wadaago martigelinta $ 1,99 / месец
Macmiilka aan xad laheyn oo magac domain ah hal koonto
Meesha hal sano oo bilaash ah oo loogu talagalay macaamiisha cusub (keyh ah ~ $ 15)
Ka walwalsan e-emiri kasta iyo talooyin aad ka hesho shirkadda martigelinta. Iska ilaali in aad indha la tiigsato oo aad cilmi baaris ka sameyso ka hor inta aadan saxiixin восък kasta oo ku dari kara xisaabtaada.
Tababarka waxaa loo yaqaan sida kormeerid. Inkastoo korjoogteyntu ay wanaagsan tahay in la keeno kharashka martigelinta hoosta (восък badan ka baro maqaalkayga kale – Xaqiiqada Неограничен хостинг); mararka qaar khatar gelin kara khibrada isticmaalaha. Meelaha lagu martiqaaday serverka dad badani waxay keenaysaa hoos u dhac ku yimaada jawaab celinta iyo wakhtiyo badan oo soo noqnoqonaya.
Derisyadaan xun ayaa ах kuwa isbaaraya kuwaas oo cunaya sahayda adeegga ama kuwa websaydka aan sharciga lahayn ee la jabsaday. Haddii aad la wadaagto server-ka leh spamka, ma jiri doonto ilo kugu filan. Haddii aad la wadaagto adeegsade qof leh tiknoolajiye ama fayraska kombiyuutarka, goobtaada ayaa laga yaabaa inay qaadsiiso sidoo kale.
Waxaa lagu talinayaa in aad eegto boggaaga internetka ee IP-ga SpamHaus Block List sida ugu dhakhsaha badan ee aad xisaabtaada u heshay. Ama ka sii fiican, weydii liiska IP-yada si loo eego ka hor intaadan saxiixin.
Haddii nasiib daro в сървър-gaaga IP uu ku jiro liiska, waxaa jira laba waxyaalood oo kaliya oo aad sameyn mapd: 1. Riix hoyga internetka si aad u akhristo caddaanka IP; iyo 2. codsiga dib u dejinta ama isbedelka cinwaanka IP.
Xalka: Akhri ToS; Ka fogow shirkadaha martigelinta raqiis ах oo leh siyaasad isticmaali karo su’aal
Kharashka qarsoon wuxuu sharxayaa sababta ay ugu martida ugu raqiisan tahay doorashada ugu fiican ee martigelinta.
Iska ilaali, waxaan ku celinayaa, iska ilaali hoygooda internetka oo raqiis ах ах bixiya khidmada ganaax aan macquul ahayn.
Akhri TOS (calaamada degdegga ah: u tag bogga loo yaqaan ‘ToS’ ee bogga, riix Ctrl + F, raadi erayga muhiimka ah ‘joojinta’ iyo ‘lacag celin’) si cad u hubso sida loo joojin lahaa. Hoyga webka ayaa laga yaabaa in lagu dalaco diiwaangelinta domainka (oo laga yaabo inuu ku kaco hal mar oo ah $ 25) iyo khidmadda SSL; laakiin восък kasta oo intaas ka badan waa tan aan tegin.
Ha raacin kuwa leh siyaasad joojin kalluunka ах iyada oo aan loo eegin sida ay u jaban yihiin.
Waxaa jira имаше iyo jeer shuruudaha iyo xaaladaha ka dambeeya soo jiidashada raqiis raqiis ах (восък dheeri ах баро).
Shirkadaha martigelinta e ugu wanaagsani had iyo jeer ma joogaan raqiis.
Nasiib darro, tani waa xeerarka warshadaha. Shirkadahaas badankoodu начин waayaan lacagta inta lagu jiro labada ama saddexda sano ee ugu horreysa ee ay haystaan ​​macaamiil, sidaas awgeed waxay qiimeeyaan sicirka sare si ay dib ugu soo celiyaan khasaarahoodii. Qaar badan oo macaamiisha ах ma ogaanayaan inay bixinayaan qiime sare waxayna helayaan shoog adag marka ay arkaan lacagta baabuurta ee ku qoran warqadda kaararka deynta.
Tusaale ahaan, InterServer iyo FastComet waxay qafilaan qiimaha cusbooneysiinta qiimaha saxda ах.
Qiimaha aad u qorto waa qiimaha aad cusbooneeysiineyso cusbadaada martigelinta mustaqbalka. Tusaale ahaan, FastComet macaamiisha kuwaas oo saxiixa seddex sano $ 2.95 / bishii waxay awoodi doonaan inay dib u cusbooneysiiyaan qorshooyinkooda mar dambe $ 2.45 / bishii. Isla waa опит mid InterServer – kaas oo u oggolaanaya macaamiisha inay cusboonaysiiyaan qiimaha saxda ах.
Sannado badan ka hor Lunarpages suuq gashay wada-xaajoodka la wadaago sida $ 4.95 / мес. Laakiin heshiiska $ 4.95 / m waxaa kaliya loogu talagalay macaamiisha kuwaas oo diyaar u ah inay bixiyaan sanadaha 5 ee hore – taas oo ah rip off-off. 5 sano ах! Восък kasta waxay ku dhici karaan internetka xilliga 5 sanadka, shirkada martigelinta ayaa kaliya qaadan karta lacagtaada iyo dukaanka dhaw.
Xalka: Ku dhaji marti-geliyaha u oggolaanaya 150 000 inod iyo kor
Анигу восък бадан бан ку фекераяа маалмо маалмахан, лаакиин ма аанан тегейнин марти-гелийяяша 50 000.
Xalka ugu sahlan ayaa ah inaad aqriso shirkadda ToS ee shirkada (talo bixin deg deg ah: u tag bogga martigelinta ToS bogga, riix Ctrl + F, raadinta ereyga muhiimka ah sida ‘iodes’ iyo ‘tirada faylasha’) si cad.
Dhinaca кале, waa masuuliyadaada inaad ku xaddiddo tirada lambarada ku jira xisaabtaada. Fahmaan in martigelinta aan xadidnayn aysan xadidnayn. Hayso faylasha la duubay ee koontadaada, tirtirto faylasha aan loo baahnayn, tirtirto emaylada si joogto ah (boorka faaruqa iyo xayeysiisyada u soo dir PC-gaaga), iyo in la xoojiyo xogtaada.
Tusaale ahaan: marti-geliyuhu wuxuu u ogolaanayaa ilaa 250 000 inot ka mid ah xisaabaadka marti-galinta la wadaagayo (taas oo ah deeqsi $ 2.15 / mo ah). Восъчен бадан ka baro dib-u-eeggeena martida.
Jawaabtu waa $ 0. В каста oo ay naadir tahay, haddana waxaa jira dalabyo marti-gelis websaydh ah bilaash ah sida ‘000Webhost’ oo la socda поддомейни (tusaale. Mydomain.000webhost.com) oo aad u isticmaali karto inaad kuad inaad kuto ooad abad abad abu abadatu. aad ku socodsiiso degel kharash kharash eber ах. Waxaa jira, si kastaba ha noqotee, xaddidaadyo iyo khataro kala duwan oo ku lug leh marti-gelinta bilaashka ah – haddii aad awoodid inaad bixiso $ 3 – $ 10 bishii, Waxaan si xoog leh kuugula talinayaa iadyyyadayayyyadayyyadayayyadayayyadayayyyadayayyadayayyadayayyadayayayyadayayyadayayyadayayayyyadayayyadayayyadayayyadayayyadayayyadayayayyadayayyadayayayyadayayayyadayayayyyadayay aadykai lahayd.
Kumaa ах bixiyeha ugu mushaharka badan marti-gelinta aad ku talinaysid?
Martigeliyaha martigeliyaha ee la wadaago wuxuu bilaabmaa $ 0,90 bishii – waa kuwa ugu raqiisan kuwa bixiya martigaliyayayaasha ugu sareeya. Si loo qiimeeyo waxqabadka martigeliyaha, waxaan ku marti qaadaa goobta tijaabinta mashiinkooda waxaanan ku daabacaa xogta waqtigeeda / xawaaraha aan soo qaado halkan. Waad ka aqrisan kartaa waaya aragnimadayda tan si faahfaahsan dib u eegista Hostinger.
Waxaa jira отдалеч nooc oo waaweyn oo marti-gelinta websaydhada ах oo la wadaago, server-ka gaarka loo leeyahay ee gaarka loo leeyahay (VPS), daruur, iyo marti-gelinta server ka go’an. Mid kastaa wuxuu bixiyaa heerar kala duwan oo waxqabadka, опита halleyn ах, iyo amniga.
Xagee ayaan ku marti gelin karaa degel bilaash ах?
Bixiyeyaasha sida Wix iyo 000Webhost waxay bixiyaan qorsheyaal bilaash ах. Si kastaba ha noqotee, marti sharaf badan oo websaydh ah ayaa sidoo kale bixiya waqtiyo tijaabo ah ou saabsan qiimeynta martigelin macquul ах ах qiimo leh waxaanan kugula talineynaa inaad опит daydaan labaditaba abaigaba.
Wix runtii waxay bixisaa qorshe bilaash ah oo xadidan. Si kastaba ha noqotee, qorshahan bilaashka ahi wuxuu la yimaadaa dib-u-dhacyo badan oo ay ka mid yihiin awood la’aanta ku-xirista boggaaga caadada ах iyo xayeysiinta Wix ee ku taal bartaada.
WordPress CMS лафтиса аяа xor в ah inaad istcimaao sidoo kale waad u isticmaali mapa si biloash ah WordPress.com (iyadoo xadidan tahay).
Marti-gelinta bilaashka ах ma wanaagsan tahay?
Marti-gelinta bilaashka ах gud ahaan kuma habboona isticmaalka muddada-dheer ilaa aad ka-talo-galeyso inaad maamusho websaydh aad u hooseeya, cabbirka taraafikada oo hooseeya. Bogagga intarnetka badankood waxay u baahan doonaan ilo badan inta ay weynaanayaan mana u eg tahay in marti-gelinta bilaashka ahi ay awoodi doonaan inay la jaan qaadaan kobacaas.
В Nutshell ах: Dhammaan Webka Guurtidu waa mid xun
Shirkadaha aan la wadaagin dhammaantood waa kuwo xun. Qorshaha martigelinta aan xadidneyn ee aan la wadaagin ayaa ah kuwo aad u caan ah oo xooggan maalmahan. In ka badan 90% shakhsiga ayaa martigelinaya домейн iyo goobaha qorshaha martigelinta la wadaago.
Kama sameysid ‘cooler’ boggeeda ama si ka wacan sababtoo ах waxaad dooranaysaa xal qaali ах. Ma aha in la sheego – haddii aad isbarbardhigto, waxaa jira waxyaabo badan oo qalad ah aad aad u khaldan oo la xariira martigelinta ama VPS martigelinta.
Qaar ka mid ah milkiilayaasha goobta ayaa loo wareejiyay VPS ama martigelinta khaaska ах si fudud sababtoo ах kibirkooda – oo ah nooca fikirka halka ay moodayaan inay ka duwan yihiin oo ka roon yihiin. Laakiin taasi run ma ahan. Xaqiiqdii, waan ogahay qaar ka mid ah milkiilayaasha ganacsiga yar yar oo u weecday martigelinta u heellan markii aysan u baahnayn, wayna ka qoomameeyeen. Waxay ku kharash gareeyeen kheyraadka kombuyuutarrada ee aan loo baahnayn iyo kaaliyaha farsamada khibradeed markii marti-gelinta la wadaago ay fiicnaan laheyd.
Ilaa aad ka dhistay bogga gaadiidka barta / blogka, ma jirto baahi loo qabo in waqti badan iyo lacag badan lagu daro qorshe awood leh. Waa waqti qashin ах ах waqti iyo lacag ах.
Haddii aad iibsaneyso восък aadan u baahnayn, waxaad lumineysaa lacag iyadoo aan loo eegin sida rakhiis ama ay fiican tahay.
Ma rabtaa восък caadi ах?
Ma u baahan tahay barnaamij gaar ах ах oo софтуер ах (т.е. PHP)?
Miyuu websitkaagu u baahanyahay софтуер gaar ах?
Wixii bilow ах –
Dooro marti-geliye websaydh ah oo aad awoodi kartad ugu yaraan sanado 2. Boggaaga / blogkaagu wax lacag ah ma sameyn karo, gaar ahaan marka ugu horeysa, sidaa darteed waxaad dooneysaa inaad hubiso inaanad airbta laantata hanthata laantata.
Uma baahnid adeegyo degel marti-gelis heer sare ах ахда. Hanti-wadaag webka la wadaago oo la awoodi karo waa inuu ku fiicnaadaa hadda. Kaliya xasuuso inaad hubiso waxyaabaha ku saabsan xaddidnaanta booska iyo waqtiga serverka.
Waqtiga hadda waa in aad diirada saartaa dhismaha waxtar leh iyo kordhinta bulshadaada. Waa in aad wax badan ku bixisid suuqgeynta iyo съдържание. Hel adeega warside wanaagsan oo bilow dhismaha liiska emailkaaga, bilaw xayeesiinta suuq-geynta warbaahinta bulshada, waxaad la xiriirtaa bloggers gudaha ах oo aad kireysaneysid si aad kor ugu qaadatid blogkaaga, iwm.
Weydii su’aalaha ku saabsan adeegga macaamiisha iyo haddii aa kaa caawin doonaan inaad fahamto website-ka sababtoo ах waxaad ku cusub tahay blogging.
Miisaaniyadda la soo jeediyey Приятелски уеб хостинг: A2 хостинг, Interserver, Daruuraha
Hoyga internetka ee wanaagsan waa waajib saaran dhammaan bogagga iyo blogyada; MEN oo aan
Webka ugu Fiican Rikoodhka Hore（Ka hooseeya $ 5 / mo）
Hoyga internetka ee wanaagsan waa waajib萨兰dhammaan bogagga iyo blogyada;但是oo aan khasab ahayn inaad ku
Webka ugu Fiican Rikoodhka Hore (Ka hooseeya $ 5 per maand)
Hoyga internetka ee wanaagsan waa waajib saaran dhammaan bogagga iyo blogyada; MAAR oo aan
Hoyga internetka ee wanaagsan waa waajib saaran dhammaan bogagga iyo blogyada; ABER oo aan
Webka ugu Fiican Rikoodhka Hore (Ka $ 5 / ամսական)
Hoyga internetka ee wanaagsan waa waajib saaran dhammaan bogagga iyo blogyada; ԲԱՅ o Օan
Hoyga internetka ee wanaagsan waa waajib saaran dhammaan bogagga iyo blogyada; POR oo aan
Bloglar haqqında məlumat: Manikini: Kif İbda Blog ‘Suċċess fl-2020
数据死掉49个可靠的技巧Quam Impetro Magis转推
Kuidas hallata oma blogi Joaloka plussid (Esita le Haeba U sa tsoa qala)
Ikona WHSR Loose – Stáhnout 1 200+ Ihe Oyiyi Ohere n’tefu
Pehea e hoʻohana ai i ka DEINARTART ekūkului kahi hui kūpaʻa pili ana ikāu博客
Vias ad Blog Mina tua en 6 registres de correu electrònic Magis
ọ6 iji kwaliteNtugharị电子邮件ndzọzọna博客gị
Как да добавите Google Календар към уебсайта си WordPress
26 tasuta saidiehitajat om hämmastavad veebisaidid te meitsjen
15个华丽的WordPress主题pou沙龙bote ak spa
Experiment encobert: vaig demanar a 28 empreses d’allotjament d’assistència en xat en directe
Virtual Private Network (VPN): En meget detaljeret guide til nybegynder
كيفية إيقاف مرسلي البريد المزعج على موقع WordPress الخاص بك
Astudiaeth Achos: Sut Mike Moloney Çəkilmiş FilterGrade
Enquesta d’allotjament web 2016: resultats, punts destacats i consells d’allotjament
Hoe verdien Facebook geld?
Codificació per a nens: programació de rascades
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Landung Ihres ersten gesponserten Beitrags
Kickassd: midagi enamat kui lihtsalt kiire Web Host Performance
Google SEO a případ MyBlogGuest – čas na vrácení rolí!
16 viisi kasutatud hostimisruumi optimeerimiseks
Vim: Faranta Vivon Pli Facila ose Kodistoj dum Helpanta Infanojn en Ugando
8 طرق لتسريع الكتابة وإنتاج مشاركات مدونة عالية الجودة
15 praktiese wenke om u blog vandag te verbeter, te bevorder en meer verkeer te kry
میزبانی پی Պալ. 10
Wie is die gewildste diens vir webwerwe?
Revizyon InterServer- ը
كيفية السيطرة على مدونتك المتخصصة مع استطلاعات القراء
Интервю с уеб хост: Въпроси с изпълнителния директор на SiteGround Тенко Николов
5 مخطوطات PHP بسيطة للمساعدة في زيادة التحويلات التي يقودها موقع الويب
12 نقطة خطوة بخطوة لكتابة أول دورة تدريبية عبر الإنترنت – الجزء الأول
Как да изградим архитектура на сайта, която стимулира SEO
Kodigo por Infanoj: Scratch-Programmierung
Per què (i com) per marcar la marca del vostre nom comercial: La meva història personal + Consells útils dels advocats
Որքանո՞վ եք առաջարկվում նախկինում առաջարկվող դասընթացներին, սեմինարները անվճար ուսուցում են անցումային մակարդակով
Hoe u ongelooflike sosiale media-video’s binne 5 minute kan skep